Eye of Ra' Arịa Ụlọ Ọha Na Eze - Imewe Mmewe
Arịa Ụlọ Ọha Na Eze
Arịa Ụlọ Ọha Na Eze Ebumnuche nke imewe a bụ ka jikọta akụkọ ihe mere eme nke Ijipt oge ochie na usoro mmiri nke ọdịnihu. Ọ bụ ntụgharị nke ederede nke ọtụtụ ihe eji eme okpukpe okpukpe ndị Ijipt nke ọma n'ụdị arịa ụlọ n'okirikiri nke na-egosipụta njiri mara ụdị ọwụwa na-agbado ebe a na-akwadoghị ụdị ọhụụ ma ọ bụ atụmatụ ọ bụla. Anya na-anọchite anya ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ndị nwanyị na ọmụmụ nke ọmụmụ Allah Ra. A na-egosi ya akwa dị iche iche n'okporo ụzọ a siri ike na-egosipụta ike na ịdị ike ya mgbe ọdịdị ya mara mma na-egosi nwanyị na amara.
Aha oru ngo : Eye of Ra', Aha ndị na-emepụta ya : Dalia Sadany, Aha onye ahịa : Dezines , Dalia Sadany Creations.
Ngwongwo ihe eji eme ulo
Arịa Ụlọ Ọha Na Eze Dalia Sadany Eye of Ra'